Displaying items by tag: climbers - Yangon Media Group
'စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်နဲ့ ဂုဏ်ပြုတာဟာ အကောင်းဆုံး ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်': ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်) -----------------
အမေရိကန် သံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြမှု လိုပြသက်သေ သုံးဦးကို စစ်ဆေး: ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၇ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြသူများအမှုနှင့် ပတ်သက်၍လိုပြ
အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင်အမှု စွပ်စွဲခံ နောက်ဆုံး တစ်ဦးကို စစ်ဆေး: ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၇ စွဲချက်တင်ထားသည့် အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်အမှု နှင့်ပတ်သက
ပုသိမ်ကြီးမှ ရဲအုပ်တစ်ဦးကို အဂတိ လိုက်စားမှုဖြင့် အမှုဖွင့်: ရန်ကုန် ၊ သြဂုတ် ၁၇ ပုသိမ်ကြီး မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်တစ်ဦးကို အဂတိလု
အယူခံ ပယ်ချခံရခြင်းကြောင့် ရာသီအစ ပွဲများကို စီရော်နယ်ဒို လွဲချော်မည်: ရီးရဲလ်တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒိုသည် ကွင်းလယ်ဒိုင်ကို တွန်းထိုးခဲ့ခြင်း
မီလန် တိုက်စစ်မှူး ဘက်ကာ ဗီလာရီးရဲလ်သို့ အငှားဖြင့် ရောက်ရှိ: အေစီမီလန်တိုက်စစ်မှူး ဘက်ကာသည် အသင်းတွင်ပုံမှန် ကစားခွင့်ရရန် မရေမရာဖြ
ရိုးရာ ခြင်းလုံးပြိုင်ပွဲမှ ဒုတိယမြောက် ရွှေတံဆိပ် ဆွတ်ခူး: ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၇ (၂၉)ကြိမ် မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ရိုးရာခြင်းလုံး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာများ မယှဉ်နိုင်သဖြင့် နိုင်ငံခြား အာမခံကုမ္ပဏီများ ဝင်လာသည့်အခါ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရန် ပြည်တွင်း အာမခံကုမ္ပဏီများ စုပေါင်းတောင်းဆို: ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၇ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာမယှဉ်
ကျောက်ဆောင်ကြားတွင် ညပ်ပြီး နွံနစ်နေသည့် ရက်သားအရွယ် တောဆင်ငယ် တစ်ကောင်ကို ကယ်ဆယ်: ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်-၁၇ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ချောင်းသာကြိုးဝိုင်း၏ ဖိုးလွန
တာချီလိတ်၌ မိုး အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်စောင်း မြေသားများ ပြိုကျကာ အိမ်တစ်လုံး ပျက်စီး: တာချီလိတ်၊ သြဂုတ် ၁၇ ရှမ်းပြည် နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တာချီလိတ်မြို့၌ သြဂုတ်
Yangon Media Group - The Yangontimes News & Flower News Journal
ဧဝရက်တောင်တက် မြန်မာသုံးဦး Camp3သို့ တက်ရောက်ရာတွင် ရေခဲပြိုကျခဲ့ခြင်းကြောင့် Base Camp တွင် ပြန်လည်အနားယူ စောင့်ဆိုင်းနေရဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၉
ဧဝရက်တောင်သို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာ တောင်တက်သမားသုံးဦးသည် ဧပြီ ၂၉ ရက်တွင် Camp3သို့ တက် ရောက်ရာတွင် ရေခဲပြိုကျမှုနှင့်ကြုံ တွေ့ခဲ့ရသောကြောင့် Base Campတွင်ပြန်လည် အနား ယူစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဧဝရက်တောင်၏ Base Camp တွင်ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာတောင် တက်သမားသုံးဦးသည် အမြင့်ပေ ၂၃၆၂၅ ပေရှိ Camp3တက်ရောက်စဉ်တွင် ယင်းနေရာ သို့ မရောက်မီ Camp 1 နှင့် Base Camp တို့အကြား တွင် ရေခဲပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ရှေ့မဆက်နိုင်ဘဲ လမ်းပိတ်ဆို့မှုနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧဝရက်တောင်ထွတ်သို့ တက်ရောက်နေသည့် မြန်မာတောင်တက်သမားသုံးဦး အမြင့်ပေ ၂၁ဝဝဝ မြင့်သည့် Camp2အထိ တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး တောင်ထွတ်သို့ တက်ရောက်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှတောင်တက်သမား သုံးဦးသည် အမြင့်ပေ ၂၁ဝဝဝ မြင့်သည့် Camp2အထိတက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ထပ်မံ၍အမြင့်ပေ ၂၃၆၂၅ ပေမြင့်သော Camp3သို့ တက်ရောက်လေ့ကျင့်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ဧဝရက်တောင်သို့ တက်ရောက် နေသည့်မြန်မာနိုင်ငံသား တောင် တက်သမားများဖြစ်သည့် ကိုညီညီ အောင်(ဒိုးလုံး)၊ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင် (poepin)နှင့် ကိုဝင်းကိုတို့သုံးဦး သည် ယခုအခါတွင် Camp2အထိ တက်ရောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ရာ ဧဝရတ်တောင်ခြေစခန်းသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် Camp2သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိခါကာဘိုရာဇီ တောင်ထက်ပိုမြင့်ကြောင်း ဧဝရက် တောင်တက်သမားများအကြောင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ Myanmar Flag on Everest စာမျက်နှာ၏ ဧပြီ၂၅ရက်နေ့ အချက်အလက်များ အရသိရသည်။
The Official Website of Yangon Times Journal and Flower News Journal, Publish by Yangon Media Group Limited.
The Free Press isaCornerstone of Democracy.
A Free Press, At its Best, Reveals Truth.
တိုက် (ဘီ) အမှတ် (၁၀၁) ၊ မဟာ ဗန္ဓုလတာဝါ ၊ ဗန္ဓုလတံတား အနီး ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Call: 01 9010073 , 01 9010074 , 01 9010075
IT: 09 540 3616
For Information - 09 400471100 , 09 964010191
Copyright © 2017-2018 Yangon Media Group. All Right Reserved. Powered by: OrientsWebs